रबि लामिछाने : प्रधानमन्त्री ज्यु, पार्टी ब’च्यो पद बच्यो अब आउनुहोस् जनता बचाऔं - NaulooDhun
काठमाडौं : सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री के पी ओली ज्यु, जनमैत्री अस्पतालको प्रा’ङ्गणबाट नमस्कार। यहाँ मात्र होइन हरेक अस्पतालमा बिरामीहरुको अवस्था एकदम पीडादायी छ। तपाईंले पुनः प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सपथ लिनु भएको छ।
सायद राजनीतिक लडाइ अब अलि म’त्थर पनि भयो होला। आज बाट कृपया कोभिडमा मात्र ध्यान दिनुहोला। म यो देशका त’मा’म बि’रामी र तिनका आफन्तको’तर्फबाट दश औला जोडि हजुरलाई विनम्र निवेदन गर्द्छु। तपाईं अस्पताल पर्दा तपाईंले बेड, अक्सिजन, र’ग’त वा कि’ड्नी नपाएको भए के हुन्थ्यो होला? अहिले जनताको हालत त्यो भन्दा कम ख’राब छैन।
नपत्याए, सपथ पछि कुनै एक अस्पतालको भ्रमण गर्नु होला। हरेक अस्पतालका विरामी लाइ निहाल्नु होला। यति बेला तपाईं जनताको आ’शुको आ’हालसँगै सपथ ग्रहण गर्दै हुनु हुन्छ। यो परिस्थितिका लागि तपाईलाई मात्रै दो’ष दिएको होइन, यो स्थिति आउनुमा तपाई, म र अरु धेरै जना, किसिम किसिमले दो’षी छौ। अब यसलाई कसरि नियन्त्रण गर्ने त्यो तिर ध्यान दिनु होला सम्मानीय मन्त्रि ज्यु।
एउटा सामान्य ब्यक्तिले जति गर्न सक्छ, म त्यो सबै गर्न तयार छु। के तपाई पनि तयार हो? पार्टी ब’च्यो, पद बच्यो। अब आउनुहोस् जनता बचाऔं। अब यसपछि पनि केही समयका लागि तपाई वा तपाईंका कुनै नेता,मन्त्रीहरूको प्राथमिकता को’भिड भन्दा अर्को केही हो भने तपाईलाई र त्यो जो कोहि लाई पनि धेरै जनाबाट, कम्तीमा पनि म बाट चाहिँ ख’तरा छ। त्यसले अब जनता बचाउ , जनता बचे न देश बच्छ अनि देश बचे न तपाइको कुर्सि बच्छ।
कपडा सुकाउँदै गर्दा ३ तले घरको छतबाट ल’डे’र सधैंका लागि संसारमा छोडिन् गीताले !
उहाँ एक जालन्त उदाहरण पनि हो ,बुढि आमाको यस्ता दमदार र एकदमै भाइरल टिकटकहरु (हेर्नुस् भिडियो )
May 19, 2021 May 19, 2021 admin2
चप्पल पनि छैनन खुट्टामा ,१०० वर्षकि आमालाई छोराले घरबाट निकालिदिएपछी अहिले सडकमा (भिडियो हेर्नुस्)
May 17, 2021 May 17, 2021 admin2